Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala - ewa.mg
Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala
News - Santé - Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
L’Organisation Mondiale de la Santé à Madagascar a offert ce Mardi 15 Septembre une ambulance Médicalisée et équipé aux CHU Anosiala
Crédit Photo et source d’information: #OMSMADAGASCAR
L’article Remise d’une ambulance médicalisée et équipé au CHU Anosiala a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Covid-19 – Madagasikara : nanolotra 36,85 tapitrisa euros ny Bad
Nankatoavin’ny filan­ke­­vi-pitantan’ny Bad, ny 22 jolay teo tany Abidjan, Côte d’Ivoi­re, ny famatsiam-bola 123,34 tapitrisa euros (trosa na fanomezana) ho an’i Ma­lawi, i Mozambika, i Madaga­sikara, ary i Sao Tomé-Prin­cipe. Vola hoentina miatrika ny Covid-19 sy ny voka-dratsiny eo amin’ny toekarena sy ny sosialy. Fampindramam-bola 36,85 tapitrisa euros ny azon’i Mada­ga­sikara, hanohanana ny fitondram-panjakana noho ny fihanaky ny valanaretina, ho fiarovana ny aina sy ny asa. Fama­tsiam-bola atao indrindra ho fiarovana ny mpiasa, ny fitiliana azy ireo, ho fitandroana ny fa­hasalamam-bahoaka. Ha­nam­piana ny karaman’ny mpiasa sy izay ilaina amin’ny fanatsarana ny lafiny sosialy. Laharam-pahamehana ny sehatra tsy mi­ankina sy ny mpiasa ao aminy. Ampitain’ny OMS hatrany ny antontanisa samihafa mom­­ba ny tsimokaretina Covid-19 amin’ireo firenena ireo ka nandraisan’ny Bad fepetra fanampiana ireo mpikambana ao aminy. Ny volana avrily, napetraka ny rafitra iray (CRF)*, mamaly haingana ny ady atao amin’ny Covid-19. Tetibola 10 miliara dolara ny ao amin’izany rafitra izany hanampiana ireo tany mpikambana sy ny sehatra tsy miankina. Avy amin’ny Bad ihany, nisy 8,9 tapitrisa dolara ny azon’i Malawi, i Mo­zam­bika ary i Madagasikara, ny 24 jona 2020.R.MathieuCRF* : Facilité de réponse rapide contre le Covid-19L’article Covid-19 – Madagasikara : nanolotra 36,85 tapitrisa euros ny Bad a été récupéré chez Newsmada.
Hafatry ny Papa François: “Fanombohan’ny tontolo vaovao ny Paka”
Fiandohan’ny fiainam-baovao ho an’ny tsirairay ny fitsanganana amin’ny maty, satria miainga amin’ny fo sy ny fahatsiarovan-tena ny fanavaozana marina”, hoy ny hafatry ny Papa François tamin’ny Paka teo.Nefa fanombohan’ny tontolo vaovao koa ny Paka, fanafahana ny fandevozan’ny ota sy ny fahafatesana, ary farany ny tontolo misokatra amin’ny fanjakan’Andriamanitra, amin’ny fanjakan’ny fitiavana, fandriampahalemana sy firahalahiana. Velona mijanona miaraka amintsika i Kristy. Ary Izy, ilay velona ho fanantenana ho an’ireo vahoaka havana syrianina, tra-pahavoazana noho ny ady maharitra ela.Fotoana izao itadiavana vahaolana politika mamaly ny hetaheta fahafahana, filaminana sy fahamarinana, hiatrehana ny krizy maha olona ary manome vahana ny fiverenana amin’ny filaminan’ny mpifindra monina sy mitsoa-ponenana, indrindra ny ao Liban sy Jordania.Ny fahaveloman’i Kristy, mba hanome fandriampahalemana ho an’ny havana afrikanina, mbola mihahaka noho ny fihenjanana sosialy, ny fifandonana maherisetra indraindray ary mahatonga tsy filaminana, fandravana sy fahafatesana any Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Cameroun. Saininy koa ny any Soudan, mandia fotoana tsy ahazoana antoka ny politika, ka aniriany ny hahazoan’ny tsirairay maneho hevitra sy hahita fahafahana, fandrosoana fanirian’izy ireo hatramin’ny ela.R.Nd. L’article Hafatry ny Papa François: “Fanombohan’ny tontolo vaovao ny Paka” a été récupéré chez Newsmada.
Famoahana andia miaramila
Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny andiany faha-40 tamin’ireo manamboninahitra niofana tao amin’ny Akademia miaramila, tao Antsirabe. Nanatrika ny lanonana tany an-toerana ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry, izay nanambara ny fanamafisana ny fampiofanana an’ireo miaramila amin’ny filatsahana amin’ny helon’ aina. Nampitondraina ny anaran’ny «général de brigade Raymond Andrianaivo » ity andiany faha-40 ity. L’article Famoahana andia miaramila est apparu en premier sur AoRaha.
Tetikasa isan-karazany no hoentina miady ny kolikoly sy ho fanamafisana ny fandriampahalemana eny amin’ny Fitsarana, ary ny fanavaozana ireo fotodrafitrasn’ny fonja araka ny fantatra taorian’ny fihaon’ny minisiteran’ ny Fitsarana sy ireo mpiara-miombon’antoka isan-tsokajiny tetsy Antaninarenina, omaly. Hatomboka amin’ity taona ity ihany ny fanatanterahana an’ireo asa mba hahatontosana an’ireo fanamby ireo. L’article Fiaraha-mientana est apparu en premier sur AoRaha.
Fonjamby-Fiofanana: mpanazatra matihanina no tanjona
Tontosa soa aman-tsara, ny asabotsy lasa teo, tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny lanonam-pamaranana ny fiofanana ho mpanazatra federaly voalohany sy faharoa, taranja fibatana fonjamby. Tanjona tamin’ny fampiofanana, hoy ny mpanazatra, Rakotoarisena Harimalala Solomampionona, ny haha matihanina ireo mpiofana. Tsy nitovy, hoy izy, ny lentan’ireo mpiofana satria nizara ho federaly voalohany sy faharoa izy ireo kanefa tsy nampanano sarotra ny fampianarana izany. Mahakasika ny kalitaon’ny fampiofanana indray, efa niditra lalindalina kokoa, tamin’ity, satria ny resaka “anatomie” ny tena noresahina.Nizara telo mazava tsara ny mari-pankasitrahana nozaraina tamin’io lanonam-pamaranana io. Voalohany, ho an’ireo afaka fanadinana mpanazatra federaly “niveau 1”, niisa 19 izy ireo ny nahazo izany. Faharoa, mari-pankasitrahana ho an’ny mpanazatra federaly “niveau 2” ka sivy mianadahy ny nisitraka izany. Farany, nanome mari-pankasitrahana ihany koa ny eo anivon’ny Solidarité Olympique, amin’ny mpikarakara ny fiofanana azy.Nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny fibatana fonjamby, Randriamanarivo Harinelina Jean Alex, fa natao hampiakarana ny lentan’ny fanazarantena homena ny atleta ny fampiofanana, hahazoana vokatra tsara hatrany amin’ny fifaninanana goavana hatrehina. Isan’ny taranja mitondra avo ny voninahi-pirenena hatrany, hoy izy, ny taranja fibatana fonjamby. Mi.Raz L’article Fonjamby-Fiofanana: mpanazatra matihanina no tanjona a été récupéré chez Newsmada.
Tena misy marina ve ny fiovana sy ny fanovana? Na tena atao, ezahina, irosoana… Anisan’izany, ohatra, ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna, ny fitondrana tsara tantana… Miara-mahita sy miaina ny zava-misy amin’izao ny rehetra. Na ahoana na ahoana, tanàna tsy ilaozan’adala?Mbola misy ihany ny tsimatimanota sy mirehareha ary sahy mihantsy ady vahoaka amin’ny tsy fanarahan-dalàna, ny fanamparam-pahefana, ny fanaovana asa ratsy… Any amin’ny faritra heverina ho lavitra fanjakana no tena miseholany izany. Poa-maso manjaka tokana amin’ny tanin’ny jamba?Na misy ny tsikombakomba ratsy amin’ny kolikoly sy ny fahazoana tambondahiny amin’izay atao; na tsy afa-manoatra firy, ohatra, ny manampahefana any ifotony noho ny antony samihafa. Mahitahita ireo olon-dratsy? Na matoky olom-pantatra, na akaiky olona amin’ny fanjakana…Tsy fantatra izay mety ho fitarainan’ny vahoaka any ifotony amin’izany. Izy ireo indray aza no voarahona, ampahoriana, tratran’ny valifaty… Anisan’ny mahabe fitarainana amin’izany, ohatra, ny sehatry ny ady tany, ny tontolo iainana inian’ny sasany potehina, ny raharaham-pitsarana…Miandry ny fanjakana foibe ve izany rehetra izany vao misy vahaolana mahomby, azo antoka, maharitra… ? Mitaky fitsinjaram-pahefana tena izy eo amin’ny vola, ny fitaovana, ny olona… Indraindray, ny olom-boafidy na ny olom-boatendry koa no manao ny ataony, manaratsy endrika ny fitondrana.Mila henoina ny feon’ny vahoaka, fantarina ny hetahetany, atao izay mety ho fampandraisana anjara azy amin’ny raharaham-pirenena miainga any ifotony araka izay vitany… Raha tsy izany, mbola resaka sy fanamby ihany ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna ary ny fitondrana tsara tantana.Mila mipaka any ifotony ny hoe fampandrosoana iaraha-manana, iaraha-manao, iaraha-misitraka. Izay raha te ho lasa lavitra. Tsy maika tsy faingana, na ny sehatra sy ny faritra vitsivitsy ihany no misitraka izay atao. Tsy efa tokony hisy fiovana sy fanovana ve izany amin’izao?Rafaly Nd.L’article Mila miara-mandroso amin’izay… a été récupéré chez Newsmada.